China Rack System fekitori uye vagadziri | Zhenyuan
Simbi gridhi dhizaini nzvimbo yenzvimbo inoumbwa nenhamba dzinoverengeka dzegridhi dzakabatana nemabhora node mune imwe gridhi fomu. China yakatanga kusuma simbi gridhi dhizaini tekinoroji uye zvigadzirwa kubva kunze kwenyika muna 1978, iyo ine zvakanakira hombe yemukati nzvimbo, kurema uremu, kwakanaka kudengenyeka kwenyika kuita
Simbi gridhi dhizaini inzvimbo yepakati inoumbwa nekubatanidza akawanda grid nhengo kuburikidza nedenderedzwa majoini zvinoenderana neimwe grid fomu. China yakatanga kuendesa simbi grid dhizaini tekinoroji uye zvigadzirwa kubva kunze kwenyika muna 1978. Iyo simbi gridhi dhizaini ine zvakanakira hombe yemukati nzvimbo, kurema uremu, kwakanaka kudengenyeka kwekuita uye kwakanyanya kuchengetedzeka.
Chimiro chegridhi mhando yepatial bar system dhizaini, uye nhengo dzakamanikidzwa dzakabatana nemajoini zvinoenderana nemimwe mitemo. Iwo majoini anowanzo gadzirwa semahinji akabatanidzwa, nhengo dzinonyanya kuiswa pasi axial simba, uye hukuru hwemuchinjikwa hwenzvimbo idiki. Nhengo idzi dzinosangana muchadenga dzinotsigirwa neumwe neumwe, muchidimbu kusanganisa nhengo dzakamanikidzwa neinotsigira system, nekudaro izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa zvine mari. Nekuda kwekubatanidzwa kweyakajairika, huwandu hwenhengo uye node zvine chimiro chakaenzana uye saizi, izvo zviri nyore kugadzirwa kwefekitori uye kuisirwa saiti.
Grid zvivakwa zvinowanzo kuve zvakakwirira-kurongeka zvakaenzana indeterminate zvivakwa, iyo inogona kumira yakakwenenzverwa mutoro, ine simba mutoro uye asymmetric mutoro mushe uye ine yakanaka seismic performance. Iyo grid dhizaini inogona kuenderana nezvinodiwa zvezvivakwa zveveruzhinji uye zvinomera zvine akasiyana maspan uye akasiyana mamiriro ekutsigira, pamwe neakasiyana ekuvaka ndege uye avo musanganiswa. Muna Chivabvu 1981, China yakazivisa iyoMitemo paKugadzira uye Kuvaka kweGridhi Zvimiro (JGJ7-80). MunaGunyana 1991, China yakadzokorora uye ikasimudzira iyoMitemo paKugadzira uye Kuvaka kweGridhi Zvimiro (JGJ7-91). Muna Chikunguru 2010, China yakazivisa iyoUnyanzvi Mitemo ye Space Chimiro Zvimiro (JGJ7-2010) nekubatanidza akakodzera marongero ezve grid zvivakwa, akadzokorora matemhe uye stereo pombi truss zvivakwa. Uye zvakare, yebhora rakasungwa majoini uye fittings yavo ye grid dhizaini, China yakanyatsoburitswa Yakasungwa Spherical Node ye Space Grid Dhizaini (JG / T10-2009) uye Yakakwira Simba Simba mabhaudhi emajoini eMuchadenga Grid Zvimiro (GB / T16939-2016), Yezve welded idenderedzwa majoini eiyo grid zvivakwa uye yavo accessories, China yakazivisa Welded Hollow Spherical Node ye Space Grid Zvimiro (JG / T11-2009). Mamwe mapurovhinzi akatoburitsa zviyero zvemuno zvekubatanidza kugadzirwa, senge mureza wedunhu reJiangsuUnyanzvi Hutsananguro hweCone Misoro yeBolted Spherical Mapfundo eSimbi Grid (Shell) (DB32 / 952-2006). Aya anoenderana zviyero ipfupiso yezvazvino kubudirira kweiyo grid chimiro mainjiniya uye kutsvagisa kwesainzi munyika medu, uye inosimudzira zvakanyanya kuvandudzwa kweiyo grid chimiro munyika medu
Iyo kambani ine 25,000m2 of afoot, mutopota truss, inopisa vachikotama uye chando vachikotama kugadzirwa okudhindira. Iyo kambani ine matatu grid yekugadzira mitsara. Iyo hombe grid yekugadzira mutsara inonyanya kubata bhaudhi bhora grid, welded bhora grid, pombi truss uye mamwe mabhizinesi, ichiona yakakwana gungano mutsara kubva kune plasma kuvharisa, gungano, kupisa, kupfura kuputika, otomatiki kupenda, chaiyo gasi kuomesa, kurongedza uye kurodha. Inogona kupa vatengi ne imwechete-yekumira sevhisi.
Structural tekinoroji uye zvigadzirwa: Kuburikidza neyekureba-tsika tsika, seyakakura chivakwa chimiro chimiro, simbi gridhi dhizaini rave kushandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemabhizimusi zvivakwa zveruzhinji senge hombe-span mafekitori emafekitori, matura, makuru marasha matumba, chiteshi dzimba, zvitoro. , dzimba dzekuratidzira, dzimba dzekurovedza muviri, nzvimbo dzekuratidzira uye chiteshi chechitima chepamusoro.
Chigadzirwa Chiitiko 1
Chigadzirwa Chekuita 3
Kugadzirwa Muenzaniso 2
Chigadzirwa Chekuita 4
Chikamu chekambani michina inoratidzira
Kambani chigadzirwa chikamu kesi sumo
Iyo purojekiti iri muZhejiang, China
Mineral Kugadzira Warehouse
Iyo purojekiti iri muShaanxi, China
Iyo purojekiti iri mu shanxi, China
Iyo purojekiti iri muGuangzhou, China
Pashure: Kugadzirwa kwekambani uye kuvaka sumo
Zvadaro: Rutivi Rwekugadzira Chiitiko cheFekitori
Modular Pipe Rack Dhizaini
Pipe Rack Dhizaini MuStad Pro
Simbi Pipe Rack Dhizaini
Structural Pipe Rack Dhizaini